चार भाइ नै भारतीय सेनामा, मिलेन दशैंमा बिदा
लाहुरेलाई न दशैं न तिहार, केवल राइफलको भार !
नयाँ दिल्ली (भारत) –नेपालमा बेला बखत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने बहस चल्छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले विक्रम सम्वत २०५२ सालमा शुरू गरेको ‘जनयुद्ध’को एउटा माग सुगौली सन्धीको खारेजी र गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने पनि थियो ।
माओवादी संघर्षको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि पनि पहिलो संविधानसभामा गोरखा भर्ती बन्द गर्ने कुरा उठ्यो । नेपालमा गोरखा भर्ती बन्दको प्रसंग बेला बखत उठेपनि भारतीय सेनामा ‘लाहुरे’ बन्न आउने नेपाली युवाको रुचि घट्नुको साटो बढ्दो छ ।
तेस्रो मुलुकमा जाने क्रम बढेकाले भारतमा अन्य ज्याला मजदुरी गर्न आउने कामदारको संख्या घटेपनि भारतीय सेनामा जागिर खाने भने रोकिएका छैनन् । सन् १९५० को नेपाल–भारतमैत्री सन्धीपछि शुरू भएको भारतीय गोरखा भर्तीमा अहिले पनि नेपालका हजारौं युवा कार्यरत छन् ।
चार भाइ नै भारतीय सेनामा
अर्घाखाँची छत्रदेव– ४, केरुङ्गा बरबोटका स्व. दिलप्रसाद श्रेष्ठका चारैभाइ छोरा इन्डियन आर्मी हुन् । आफ्नो जीवनकालको उर्जाशील समय भारतीय भूमिको रक्षामा खर्चिएका उनीहरू आफ्ना सन्ततिले भने नेपालमै काम गरून् भन्ने चाहन्छन् ।
पारिवारिक कारणले गर्दा दिलप्रसादले भारतको मेघलाय राज्यका गभर्नरको घरमा पाएको सरकारी नोकरी बीचमै छाड्नुपर्‍यो ।
बाबुको सरकारी नोकरी खाने सपना पूरा हुन नसकेपनि छोराहरू भने सबैले भारतीय आर्मीको ‘आसाम राइफल युनिट’बाट सरकारी जागिर शुरू गरे ।
दुई वर्षपहिले ३३ वर्षे सेवा पूरा गरी अवकाश पाएका जेठा छोरा बाबुराम अहिले नेपालको तराईतिर बस्छन् भने माइला कुलानन्द, साँहिला रामचन्द्र र कान्छा बालकृष्ण भारतमै सेवा दिइरहेका छन् ।
सन् १९८५ मा सिपाहीबाट जागिर शुरू गरेका बाबुराम हवल्दार भएर रिटायर्ड भए । भारत–पाकिस्तान बोर्डर जम्मु–कश्मीर तथा बंगलादेश, चीन र श्रीलंकाको सिमानामा धेरै समय कार्यरत बाबुरामलाई आफ्नै देश नेपालको सीमामा काम गर्ने आवसर भने जुरेन ।
सन् १९८९ मा भारतीय सरकारले श्रीलंकामा शान्ति सेनाको रूपमा खटाएका बाबुरामलाई आँखै अगाडि आफ्ना धरै साथी तमिल विद्रोहीको गोलीले ढलेको देख्दा अझै पनि मन खिन्न हुन्छ । हुन त मर्ने र मार्ने कशम खाएर सेनामा भर्ति भएका बाबुरामलाई आफ्नो सेवाको समयमा कुनै चोटपटक लागेन । ‘बाआमाको माया अनि कुलदेवताको आशिर्वादले कहिल्यै केही नराम्रो भएन,’ बाबुरामले लोकान्तरसँग भने ।
दाजुको प्रेरणाले १९८७ मा इन्डियन आर्मीमा भर्ति भएका माइला भाइ कुलानन्द अहिले आसाममा कर्यरत छन् । खेलकुदमा समेत रुचि राख्ने उनी अर्को साल नायब सुब्बामा बढुवा भएपछि रिटायर्ड हुने सोचमा छन् । विभिन्न बक्सिङ्ग प्रतियोगितामा भाग लिई तक्मा समेत प्राप्त गरेका कुलानन्दलाई बक्सर भनेर चिन्छन्, बटालियनमा उनका साथीहरूले ।
माइला दाजुजस्तै बक्सिङ्गमा रुचि राख्ने साँहिला रामचन्द्र सन् १९९३ मा सिपाहीमा भर्ति भएर अहिले हवल्दारको रूपमा आसाममै कार्यरत छन् । दुइ छोराका पिता रामचन्द्र आफ्ना छोराहरूले नेपाल आर्मीमा सेवा गरून् भन्ने चाहन्छन् ।
दिलप्रसादका कान्छा छोरा बालकृष्ण अहिले माणिपुरमा कर्यरत छन् । १९९३ मा भर्ति भएका बालकृष्णले धेरै समय नागाल्यान्डमा बिताए ।
भारतीय माओवादीको आधार इलाका मानिने उक्त क्षेत्रमा धेरैपटक लडाइमा सामेल पनि भए । अर्को साल सिपाहीमा बढुवा हुन लागेका बालकृष्णले जागिरका कारण दशैंमा नेपाल आउन नसक्ने बताए ।
‘छुट्टी मागेको बिदा नै मिलेन,’ लोकान्तरसँग टेलिफोनमा बालकृष्णले भने, ‘लाहुरेलाई न दशैं न तिहार, केवल राइफलको भार ।’